Optical Brighteners Kune Vagadziri veMachira & Suppliers - China Optical Brighteners For Textile Factory.
Iyo inonyanya kushandiswa kuchena kwepepa pulp, saizi yepasi, kupeta uye mamwe maitiro.Inogona zvakare kushandiswa kuchena kwekotoni, yerineni uye cellulose fiber machira, uye kupenya kwemavara-mavara efiber machira.
Acrylic fiber chlorinated bleaching processing technology Dosage: fluorescent whitening agent BAC-L 0.2-2.0% owf sodium nitrate: 1-3g/L formic acid kana oxalic acid kugadzirisa pH-3.0-4.0 sodium imidate: 1-2g/L maitiro: 95 -98 madhigirii x 30- 45 maminitsi kugeza ratio: 1:10-40
Yakanaka kunyungudika kwemvura, yakanyungudika mu3-5 nguva yehuwandu hwemvura inopisa, inenge 300g parita yemvura inopisa uye 150g mumvura inotonhora. Haina hanya nemvura yakaoma, Ca2 + uye Mg2 + haikanganisi kuchena kwayo.
Kugadzikana kwakanaka kwekuchengetedza.Kana iri pazasi -2 ℃, inogona kutonhora, asi inonyungudika mushure mekupisa uye haizokanganisa mashandisiro ekushandisa;Kuenzaniswa nezvigadzirwa zvakafanana, ine mwenje wakafanana nekukurumidza uye kutsanya kweasidhi;
Kudzika-kugadzikana kwekushisa: kuchengetwa kwenguva refu pa -7 ° C hakuzokonzeri miviri yechando, kana miviri yechando ichionekwa pasi -9 ° C, kubudirira hakuzoperi mushure mekupisa zvishoma uye kunyunguduka.
Pakuderedza vamiririri, mvura yakaoma ine kugadzikana kwakanaka uye inopesana ne sodium hypochlorite bleaching;Ichi chigadzirwa chine avhareji yekuwachisa kukurumidza uye yakaderera affinity, iyo yakakodzera pad dyeing process.
Iyo fluorescent whitening agent EBF-L inofanirwa kumutswa zvizere isati yashandiswa kuti ive nechokwadi chekuchena uye kuenderana kweruvara kwejira rakagadziriswa.Usati wachena machira akacheneswa neokisijeni bleaching, iyo yakasara alkali pamicheka inofanirwa kugezwa zvizere kuti ive nechokwadi chekuti chena mumiririri ane mavara akazara uye ruvara rwakajeka.
Inonyanya kushandiswa kuchena polyester, polyester-donje yakasanganiswa kuruka, uye kuchena nylon, acetate fiber uye shinda yekotoni yakasanganiswa kuruka.Inogona zvakare kushandiswa kugadzira uye oxidative bleaching.Iine kugeza kwakanaka uye kukurumidza kutsanya, kunyanya yakanaka sublimation fastness.Inogona zvakare kushandiswa kuchena mapurasitiki, machira, kugadzira mapepa, kugadzira sipo, nezvimwe.
Fluorescent brightener CXT parizvino inoonekwa sechinhu chinopenya zviri nani pakudhinda, kudhaya uye detergents.Nekuda kwekuunzwa kwemorpholine gene muwhitening agent molecule, zvakawanda zvezvivakwa zvaro zvakagadziridzwa.Semuenzaniso, iyo acid kuramba inowedzerwa, uye iyo perborate kuramba zvakare yakanaka kwazvo.Inokodzera kuchena kweselulosi fibers, polyamide fibers uye machira.
Iyo cellulose fiber yakacheneswa nechigadzirwa ichi inopenya muruvara uye isiri yero, iyo inovandudza zvikanganiso zveyero yezvinopenya zvinopenya uye inowedzera zvakanyanya kusimba kwechiedza uye kupisa kupisa kweselulosi fiber.
Izvo hazvina kukodzera kushandiswa mubhati rimwe chete ne cationic surfactants kana dhayi.Iyo fluorescent whitening agent VBL yakagadzikana kune inishuwarenzi hupfu.Fluorescent brightener VBL haidziviriri kune simbi ions semhangura nesimbi.
© Copyright 20102021 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.	Optical Brightener 52 Subang Chemcial Fluorescent Brightener SWN Ranipal WG Optical Brightening Agents Shandong Subang >